Saraakiisha NISA ee Jubbaland oo hawlo nabadeyn ah ka wada miyiga Kismaayo | allsaaxo online
Saraakiisha NISA ee Jubbaland oo hawlo nabadeyn ah ka wada miyiga Kismaayo
Published on August 17, 2018 by said · No Comments
Saraakiisha ciidanka Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Jubbaland oo kaashanaya masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa mudo ku siman Todobaad hawlo nabadeyn ah waxa ay ka wadaan miyiga fog, Koonfurta Galbeed ee magaalada Kismaayo.
Duleedka magaalada Kismaayo waxaa isku heysta oo dagaal khasaare geystay uu ku dhexmaray maleeshiyaad u abaabulan qaab beeleed oo mudo todobaad ka badan isku heysta halkaasi.
Dagaalka labadan beelood ayaa waxaa la sheegay inuu salka ku hayo arrimo dhuleed iyo waliba xoolo labada dhinac ay kala dhaceen, midaasina ay sababtay in beelaha ay isku soo hub uruursadaan.
Xubno la socda saraakiisha Nabad Sugidda Jubbaland ee nabadeynta wada ayaa waxa ay inoo sheegeen in xal laga gaaray dhibaatooyinka miyiga ka jiray, islamarkaana la soo saaray qodobo ay ku heshiiyeen dhinacyada diriray.
Sawirro laga soo qaaday kulan dhexmaray Saraakiisha Nabad Sugidda iyo waxgaradka labada beelood ayaa waxaa ka muuqday iyaga oo wada fadhiya, islamarkaana ka wada hadlaya sidii colaadan aysan mar dambe u soo laaban laheyn.
Baarlamanka Puntland ayaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) waxa ay ugu baaqeen inuu qaado talaabo deg deg ah oo wax looga qabanayo colaadaha soo laab laabtay ee ka taagan duleedka magaalada Kismaayo.